Ahiahina herisetra :: Hanadihady momba an’i Tahisy ny Polisim-pirenena • AoRaha
Ahiahina herisetra Hanadihady momba an’i Tahisy ny Polisim-pirenena
Manokatra fanadihadiana momba ny fahafatesan’i Tahisy, ilay vehivavy nitondra vohoka maty teo am-piterahana, izay nalaza sy niteraka resabe tao amin’ny tambazotran-tserasera “facebook” ny ao amin’ny Polisim-pirenena. Natomboka, omaly, ny fitadiavana ny marina manoloana ny filazana sy fiparitahan’ny trangana herisetra nihatra taminy fony fahavelony..
“Mandray an-tanana ny raharaha ny sampan-draharaha misahana ny fanadihadiana lalina (DPJ) sy ny polisy misahana ny zaza tsy ampy taona sy ny mamoafady (PMPM). Hofantarina ny toerana nisehoan’ny tantara sy ny hopitaly nitondràna an’ilay vehivavy ary ny marina momba ny fampijaliana mety ho nahazo azy”, hoy ny kaomisera Seraly Hercule, lehiben’ny sampan-draharaha misahana ny fanadihadiana lalina (DPJ) eo anivon’ny Polisim-pirenena. Hotadiavina, hoy hatrany ny polisy, ireo rehetra mahafantatra ny tantaran’i Tahisy, fony fahavelony, toy ny namany sy ny fianakaviany.
Nanao fanambaràna tao amin’ny pejy “facebook” amin’ny anaran’ny Fikambanana Fitia tamin’ ity tranga ity ihany koa Rajoelina Mialy, vadin’ny Filoham-pirenena sady filohan’ny Fikambanana Fitia. “ Manaraka akaiky ny raharaha Tahisy ny tenako ary efa eo am-pelan-tanan’ny borigady misahana ny vehivavy (BFP) sy ireo mpiara-miasa misehatra amin’ny ady amin’ny herisetra izany, amin’izao fotoana izao. Manana ny lalàna mifehy ny ady amin’ny herisetra isika ary mila hampiharina izany. Ny fisian’ny Fitsarana manokana momba ny herisetra mifototra amin’ny mahalahy sy amin’ny mahavavy dia ahafahana mamantatra tsara ny marina momba io raharaha io”, hoy Rajoelina Mialy tao amin’ny pejin’ny Fikambanana Fitia.
Maty teo am-piterahana ny zanany i Tahisy, tovovavy, 21 taona, tamin’ny alatsinainy lasa teo. Tazovony no nahazo azy sy nitarika ny fahafatesany, araka ny nambaran’ny tovolahy, rain-janany, tamin’ny antso an-telefaonina natao taminy. Nalevina teny Manjaka Ilafy i Tahisy mianaka, tamin’ny alarobia lasa teo.
Fisandohana andraikitra :: Maorisiana tratra nisoloky olona an-jatony